London gudaheeda 4 maalmood gudahood - Booqashooyinka lama huraanka ah ee aadan tabi karin | Safarka Absolut
London 4 maalmood gudahood
Caasimada England waa meel kale oo ay doortaan dalxiisayaal badan. Ku raaxayso London 4 maalmood gudahood Waxaa macquul ah safarka aan maanta kaaga tagnay. Sidaa darteed, ma tabi doontid mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah, in kasta oo ay run tahay in had iyo jeer ay jiraan waxyaabo badan oo la arki doono.
Waa la oggol yahay, maalmaha meelaha loo safro sida London weligood ma yimaadaan. Sababtoo ah waxaan rabnaa inaan kuu ogolaano inay kaa qaado quruxdeeda marka la eego Dhaxalka Aduunka waxaa loola jeedaa, matxafyadeeda, fagaarayaasha iyo qodobo kale oo badan oo aan u soo qaadanay tixraac aan ku aragno London 4 maalmood gudahood.
1 London 4 maalmood gudahood, maalinta koowaad
2 Maxaa lagu arkaa maalinta labaad London
3 Maalintii saddexaad London
4 Maalintii afaraad booqasho London
London 4 maalmood gudahood, maalinta koowaad
Si aad u bilowdo maalinta koowaad, waxaad ka samayn kartaa mid ka mid ah fagaarayaasha ugu caansan meesha. Filimka 'Filcadilly Circus' Waxaa loo dhisay qarnigii XNUMX-aad inuu isku xiro meelaha ugu waaweyn ee laga dukaameysto. Maanta, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan. Marka waxay noqon doontaa meel wanaagsan oo laga bilaabo safarkayaga. Waxaan socon doonnaa jidadka illaa aan ka gaarno Buckingham Palace taas oo, sidaan ognahay, ay degan tahay Boqoradda Elizabeth II. Kaliya inaad ka aragto banaanka oo aad ugu raaxeysato beddelka waardiyaha waa mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan meesha.
Qabsashada maalinta, waxaan aadi doonnaa Barxada Trafalgar. Dhammaan dhacdooyinka waaweyni halkan ayey ka dhacaan oo marwalba waxaad arki doontaa iyada oo aad u camiran. Waa mid ka mid ah bartamaha iyo meelaha muhiimka ah ee magaalada. Fagaarahan waxa aad ku arki doontaa mid ka mid ah taalooyinka ugu caansan sida 'Tiirka Nelson'. Sidoo kale halkan waxaad ka heli doontaa 'Gallery Qaranka'. Waxay leedahay albaab laga soo galo oo bilaash ah halkaasna waxaad ku arki kartaa mid ka mid ah ururinta ugu muhiimsan uguna dhameystiran ee rinjiyeynta. Si aad u dhammaystirto maalin sixir ah, wax u eg socod ku ah 'St. James´s Park '. Waa beerta ugu faca weyn magaalada dhexdeeda waxayna leedahay baarar iyo sidoo kale goob lagu ciyaaro. Waxay furantahay subaxa hore ilaa saqda dhexe. Haddii aad rabto inaad ku raaxeysato meel madadaalo ah, markaa 'Chinatown' waxay noqon doontaa mid kale oo ka mid ah joogsiyada waa in la arkaa. Ku raaxayso cuntooyinkeeda macaan oo naftaada u oggolow in lagaa qaado dhammaan midabka iyo xafladda ay bixiso.
Maxaa lagu arkaa maalinta labaad London
Maalintaan labaad waxaan tagi karnaa caanka caanka ah ee Mercado de Candem, gudaha Magaalada Camdem. Tan awgeed waxaad u qaadan kartaa midka loo yaqaan 'Waterbus' oo halkaan ku geyn doona wax ka yar saacad. Markaad halkaa gaarto, waxaad aadi kartaa meheradaha oo aad ku raaxeysan kartaa suxuun macaan iyo cunno heer waddadeed ah. Hadaad wali wakhti haysato, wax lamid ah hal socod oo dheeri ah oo maraya 'Candem High Street' waxaadna arki doontaa bilicdeeda beddelkeeda iyo asalkeedaba.
Hadda kahor iyo galabtii, waxaan dib ugu laaban karnaa waddo cusub oo aan ku booqan karno 'St. Paul Katidral '. Waxay leedahay qiimo soo gal oo qiyaastii ah 18 rodol, qiyaastii. Isaga ka dib, kuma raaxeysan karno laakiin waxaan ku raaxeysaneynaa Wabiga Thames, annaga oo ka gudbeyna buundada ganaaxa ee loo yaqaan 'Buundada Millennium'. Markaad halkaas gaarto, waxaad ka heli doontaa matxaf farshaxan casri ah oo aan cid kale ahayn, 'Tate Modern'. Waxay leedahay labadaba sawirro iyo sawirro ama farshaxanno galitaankeeduna waa bilaash.
Maalintii saddexaad London
Waa lagama maarmaan in la booqdo meelaha ugu badan ee la raadsado iyo meelaha la codsaday. Taasi waa sababta London ay 4 maalmood gudahood noogu yeeraan si aan uga hadalno 'London Eye' weyn. Mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan, oo haddii aad ku dhiirrato inaad fuusho, kaaga tagi doonta aragtiyaha muuqaalka weyn ee magaalada oo dhan. Waxay ku taal bartamaha London, aad ugu dhow 'Big Ben', qodob kale oo kulankeena ka mid ah. Waa saacadda ugu caansan adduunka, oo saldhigga mitrooga ay u jirto laba daqiiqo oo keliya. Ma iloobi karno inaan sawirro ka qaadno baarlamaanka dhexdiisa iyo Westminster.
Waad kireysan kartaa safar hagitaan ah, oo soconaya hal saac si aad u aragto gudaha. Hal maalin oo dheeri ah, ma iloobi karno inaan booqano matxaf cusub, kiiskan wuxuu noqon doonaa 'Matxafka Ingiriiska', oo ku yaal Holborn. Hadaad wali heysato tamar, ma ogolaan karno in maalin uun dhamaato adoon aadin 'Hyde Park', Kensington Palace iyo 'Royal Albert Hall'. U dhow, waxaa jira xaafad shaki la'aan kuu yeeri doonta adiga. Ku saabsan yahay 'Ogeysiinta Hill'. Sabtida wuxuu suuq ku leeyahay 'Wadada Portobello'.
Maalintii afaraad booqasho London
Shaki la'aan, waxaa jira meelo badan oo la booqdo oo xitaa laga fikiro in London lagu arko 4 maalmood gudahood ay kufilan tahay, waxay umuuqataa inaysan ahayn. Laakiin waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan isku dayno inaan ku raaxeysano daqiiqad kasta iyo waxa aan ka heli doonno wadadeena. Sidaa awgeed, maalintaan ugu dambeysa magaalada, waxaan ku raaxeysan karnaa Brick Lane, oo leh mid ka mid ah suuqyada ugu caansan. Kadib, waan aadi doonnaa 'Tower of London'.
Qalcad oo sidoo kale adiga kuguula dhawaaqi doonta sawirada badan ee aan ka helno xusuusta iyo kaararka boostada. Meeshan waxaan ka arki karnaa Daarta Boqortooyada, oo ah qalcad taariikhi ah, oo ku taal dhinaca woqooyi ee Thames. Marka si guud loo hadlo, waxaan dhihi karnaa 'Tower of London' waa dhismo leh dhowr dhisme, oo ay ku jiraan derbiyada iyo xamaamka. Xuquuqda aaggan, waa mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah 'Bridge Bridge'. Meel kasta oo laga soo tago, sawirka meeshani wuxuu ka mid noqon doonaa halyeeyada waaweyn. Haddii aad haysatid waqti aad ku nasato, ha ilaawin inaad booqato 'Harrods' iyo raaxada ku hareeraysan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » London 4 maalmood gudahood
Qorsheyso usbuuc dhammaad ah sidii lamaane
Qalcadda Mad King: Markay Jarmalku Waxyooday Disney